Warbixin horudhac ah oo laga soo saaray gabar yar oo 15 jir ah oo meydkeeda laga helay… – Hagaag.com
Posted on 15 Agoosto 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dowladda dalka Malaysia ayaa warbixin horudhac ah kasoo saartay gabar yar oo 15 jir ah oo u dhalatay dalka Ingriiska taas oo maalmihii u dambeeyay la la’aa, balse markii dambe laga helay meydkeeda keynta Dusun ee dalkaasi.
Gabadhan oo lagu magacaabay Nora Quorin (15-jir) ayaa halka laga helay oo ah goob dalxiiska loo tago ayay iyada iyo qoyskeeda waxa ay gaareen maalin ka hor markii la waayay, waxaana wararku ay sheegayaan in habeen madow laga waayay qol ay la jiiftay walaaleheed, iyadoona daaqada ay furneyd.
Baadi-goob qaatay maalmo ayaa waxaa gabadhan meydkeeda laga helay keynta Dusun, waxaana ay boolisku baaris ku sameeyeen meydkeeda.
Warbixin baaristaasi ku saabsan oo ay booliska maanta soo saareen ayaa lagu sheegay in gabadhaasi ay gaajo iyo wel-wel u dhimatay islamarkaana eysan jirin wax tuhun ah oo gabadhaasi in la dilay laga qabo.
Madaxa booliska magaalada Seremban, Mohammad Mat Yusop oo warbixinta baarista horudhaca ah warbaahinta la qeybsaday ayaa sheegay in gabadhani ay u dhimatay dhiig caloosha uga furmay oo ka dhashay gaajo iyo wel-wel.
Axaddii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa gabadhani sabaxnimadii laga waayay qolkii ay jiiftay, waxaana la arkay daaqada oo furan mana la oga sida ay wax u dheceen.